China ngokwezifiso esiwuhogelayo 100% umsizi polyester umswakama amadoda t shirt ifektri abakhiqizi | Umbono
inkambiso yokuphefumula eyi-100% ye-polyester umswakama wokukhotha abesilisa
Lesi sikibha senziwe nge-100% polyester cationic, sinomsebenzi omuhle owomile osheshayo. Ilungele noma yiliphi iqembu lezemidlalo elifuna ukugqama esixukwini nge-trend melange!
100% umswakama wicking polyester cationic
Indwangu ephefumula kakhulu yalelihembe lezemidlalo ayisindi ngakho-ke ngeke ikusindise ekushiseni nasemswakeni. Iza ngemibala engaphezu kwengu-30 ukuze ukwazi ukuthola lokho okulungele iqembu lakho, noma ngabe umdlalo wakho uyibhasikidi ye-basketball noma i-croquet. Futhi sinayo itholakalela izingane, intsha, nabantu abadala, nosayizi wokuhlanganisa futhi ungenziwa ngezifiso.
Langaphambilini inkinobho yesiko iyunifomu yesikole inkinobho yesiko efekethisiwe pique polo shirt logo
Olandelayo: Thumela Okulandelayo
I-Oem Men T-Shirt
Isikibha Samadoda esidayisa yonke impahla